Akeekkachiisa fuula Feesbuukii sobaa maqaa Obbo Xurunaa Gamtaatin baname! – ኢትዮጵያ ቼክ
Akeekkachiisa fuula Feesbuukii sobaa maqaa Obbo Xurunaa Gamtaatin baname!
Fuulli Feesbuukii maqaafi suuraa Itti gaafatamaa Waajjira Koongirasii Federaalawaa Oromoo /KFO/ fi miseensa koree hoji raawwachiistuu dhaabichaa Obbo Xurunaa Gamtaa fayyadamuun baname odeeffannoowwan garagaraa maxxansaa jira.
Fuulichi Amajjii 20, 2021 kan baname yemmuu ta’u ammatti hordoftoota kuma 18 ol qaba.
Kana malees lakkoofsi namootaa maxxansawwan fuulichaa irratti yaada kennanfi qoodan olaanaadha.
Sakatta’iinsa Itoophiyaa Cheek fuula Feesbuukii kanarratti taasiseen fuulichi biyya Ijiptii akka hoogganamu hubachuu dandeenyera.
Itti gaafatamaan Waajjira Mummee KFO Obbo Xurunaa Gamtaa, fuulli Feesbuukii maqaafi suuraa isaanii fayyadamuun baname kun kan isaanii akka hintaane, odeeffannoon achirratti maxxanfamus kan isaanii akka hintaane Itoophiyaa Cheekitti himaniiru.
“Fuulli Feesbuukii sun kankoo miti. Ergaas isarratti barreessee hin beeku. Namni Feesbuukii sanarratti barreessus naamusa hinqabu, namas arrabsa” jedhan.
Dabalataan fuulli Feesbuukii kun akka cufamuuf irra deddeebiin iyyachuu isaaniis nutti himaniiru.
Akkaawuntii Feesbuukii tokko qofa akka qaban Itoophiyaa Cheekitti kan himan Obbo Xurunaan, akkaawuntiin Feesbuukii isaanii inni sirriin isa kana (https://www.facebook.com/turune.gamtaa) akka ta’e nutti himaniiru.
Akkaawuntiiwwanfi fuulawwan miidiyaalee hawaasummaa sirrii hordofuun odeeffannoowwan sobaafi dogongoraa irraa of yaa eegnu.